Apokalypsy 14: 14-20
Apokalypsy 13 Apokalypsy 14 Apokalypsy 15
Ary indro, nahita rahona fotsy aho, ary nisy tahaka ny Zanak'olona nipetraka teo ambonin'ny rahona, Izay nisatroka satroboninahitra volamena sady nitana fijinjana maranitra teny an-tànany.
Dia naroson'Ilay nipetraka teo ambonin'ny rahona tamin'ny tany ny fijinjany, ka voajinja ny tany.
Ary nisy anjely iray koa nivoaka avy tao amin'ny tempoly tany an-danitra, ary izy koa nanana fijinjana maranitra.
Ary nisy anjely iray koa nivoaka avy teo amin'ny alitara, ary nanana fahefana tamin'ny afo izy ary izy niantso ilay nanana ny fijinjana maranitra tamin'ny feo mahery hoe: Arosoy ny fijinjanao maranitra, ka angony ny sampahom-boaloboka eo amin'ny tany; fa masaka tsara ny voalobony.
Ary naroson'ilay anjely tamin'ny tany ny fijinjana, dia nangoniny ny voaloboky ny tany ka nazerany tao amin'ny famiazana lehibe, dia ny fahatezeran'Andriamanitra;
Ary voahitsaka teny ivelan'ny tànana ny famiazana ary avy teo amin'ny famiazana dia nisy ra nahadifotra hatramin'ny lamboridin-tsoavaly ka lasa hatramin'ny enin-jato amby arivo stadio.